Iqoqo eliQala kakhulu leZibhalo zeBuddhist
NgesiBuddhism, igama elithi Tripitaka (iSanskrit elithi "iibhasiki ezintathu"; "iTipitaka" e-Pali) ngumqoqo wokuqala wamaBuddha. Iqulethe iitekisi ngebango eliqineleyo lokuba ngamazwi eBuddha yembali.
Iicatshulwa ze-Tripitaka zihlelwe ngamacandelo amathathu aphezulu- iVinaya-pitaka , equle imigaqo yokuphila komntu oonondlo kunye namademoni; I- Sutra-pitaka , iqoqo leentshumayelo zeBuddha nabafundi abaphezulu; kunye ne- Abhidharma-pitaka , equlethwe ukutolika nokuhlalutya iingcamango zeBuddhist.
E-Pali, la yiVinaya-pitaka , i- Sutta-pitaka kunye ne- Abhidhamma .
AmaBuddhist chronicles athi emva kokufa kukaBuddha (malunga ne-4 leminyaka BCE) abafundi bakhe abaphezulu bahlangana kwiBhunga lokuqala loBuddhist ukuze baxoxe ngekamva le- sangha - uluntu lwabahlali beeendoda kunye namademoni - kunye ne- dharma , kulo mzekelo, Iimfundiso zikaBuddha. Umonki ogama linguPuali ufunde imigaqo kaBuddha kwimonks kunye namantombazi ememori, kunye nomzala kaBuddha nomlindi, uAnanda , ufunde iintshumayelo zikaBuddha. Ibandla lamkela ezi zihlandlo njengeemfundiso ezichanileyo zeBuddha, kwaye zaziwa ngokuba yiSutra-pitaka kunye neVinaya.
I-Abhidharma yi- pitaka yesithathu, okanye "ibhaskithi," kwaye kuthiwa yongezwa ngexesha leBhunga lesiThathu lamaBuddha , 250 BCE. Nangona i-Abhidharma ngokuqhelekileyo ibhekiswe kwiBuddha yembali, mhlawumbi yayibhalwe ubuncinane kwinkulungwane emva kokufa kwakhe ngumbhali ongaziwayo.
Ekuqaleni, ezi zibhalo zagcinwa ngokukhunjulwa kwaye zahlabelelwa, kwaye njengobuBuddha basasazeka ngeAsia kukho ukuhlabelela ngeelwimi eziliqela. Nangona kunjalo, sinemifanekiso emibili kuphela epheleleyo ye-Tripitaka namhlanje.
Yintoni eya kuthiwa i-Pali Canon yi-Pali Tipitaka, igcinwe ngolwimi lwe-Pali.
Le ngqungquthela yenzelwe ukubhala kwikota yokuqala ye-1 BCE, eSri Lanka. Namhlanje, i-Canon ye-Pali yincwadi ye-Canon ye- Theravada Buddhism .
Kukho mhlawumbi amaninzi angamaSanskrit, ahlala apha namhlanje kwiingcezu. I-Sanskrit Tripitaka esinaye namhlanje yaxhunyaniswa ngokubanzi kwiinguqulelo zesiTshayina, kwaye ngenxa yesi sizathu, kuthiwa yi-Chinese Tripitaka.
I-Sanskrit / isiShayina inguSutra-pitaka nayo ibizwa ngokuba yiAgamas . Kukho iinguqu ezimbini zeSanskrit zeVinaya, ezibizwa ngokuthi iMulasarvastivada Vinaya (elandelwa kwiBibetan Buddhism ) kunye neDharmaguptaka Vinaya (ilandelwa kwezinye izikolo zaseMahayana Buddhism ). Ezi zibizwa ngokuba zizikolo zakuqala zaseBuddha apho zigcinwe khona.
Inguqulelo yesiTshayina / yeSanskrit ye-Abhidharma esinayo namhlanje kuthiwa yiSarvastivada Abhidharma, emva kwesikolo saseSarvastivada saseBuddhism esilondolozile.
Ukufumana okungakumbi ngezibhalo zeBibetan ne-Mahayana Buddhism, bona iMahayana yaseChina kunye neCanon yaseTibetan .
Ngaba Ezi Zibhalo Ziyinyaniso Ngokwenene YesiQiniso?
Impendulo ethembekileyo kukuba, asiyazi. Ukuthelekisa i-Pali ne-Chinese Tripitakas kubonisa ukungalingani okukhulu. Ezinye iindatshana ezihambelanayo ubuncinane zifana nomnye, kodwa ezinye zihluke kakhulu.
I-Canon ye-Pali iqulethe inani le-sutras efunyenwe nenye indawo. Kwaye asinayo indlela yokukwazi ukuba ingakanani i-Canon ye-Today yanamhlanje ifanelwe inguqulo eyabhalwa ngaphezu kweminyaka engamawaka amabini edlulileyo, elahlekelwe ixesha. Abaphengululi bamaBuddhist bachitha ixesha elihle elixubusha imvelaphi yeetekisi ezahlukeneyo.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba ubuBuddha abukho "inkolelo" inkolo-oko kuthetha ukuba izibhalo azicingeki ukuba ubulumko bukaThixo obonakalisiweyo. AmaBuddha awafunganga ukuba amkele onke amagama njengenyaniso yinyani. Kunoko, sithembele kwisingqiqo sethu, kunye nokuqonda kootitshala bethu, ukutolika ezi zibhalo zakuqala.
IiNcwadi zeGood Kids Best of Elections, Politics and Voting
Izitulo zaseJapane eziDumo eziLwazi